दिल्ली र प्रचण्डलाई ओलीकाे चेतावनी- प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछु भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ ! « Media for all across the globe
दिल्ली र प्रचण्डलाई ओलीकाे चेतावनी- प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछु भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको अतिक्रमित भूमि सहित समेटेर नक्सा सँच्याएपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन भारतीय पक्ष र पार्टी भित्रेैैैैका केही लागिपरेको संकेत गरेका छन्। काठमाडौंमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनद्वारा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले याे संकेत भारतीय नेतृत्व र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डकाे पछिल्लो गतिविधिप्रति लक्षित देखिन्छ।
“दिल्लीका मिडिया, बौद्धिक बहस र दूतावासका क्रियाकलाप, त्यतिमात्र होइन होटलहरुमा भइरहेका जमघटले मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन के-के भइरहेको छ सजिलै बुझ्न सकिन्छ। चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्दा मेरो सरकार ढलेको थियो। अहिले हाम्रो बहुमत छ। ओलीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ”- उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्न मन नभएको बताए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन प्रयास गर्नेलाई गर्न दिऔँ। कसैले हतार नगरे हुन्छ। अहिले म हट्ने हो भने नेपालका पक्षमा कोही पनि बोल्ने मान्छे हुन्न। आजका लागि होइन, भोलिका लागि। आफ्ना लागि होइन देशका लागि आवश्यक भएकाले बसेको हुँ।’